अमेरिका एमसीसी संशोधन गर्न तयार छैन, बरु फिर्ता लैजान्छ : परराष्ट्र मन्त्री « Naya Page
अमेरिका एमसीसी संशोधन गर्न तयार छैन, बरु फिर्ता लैजान्छ : परराष्ट्र मन्त्री
काठमाडौं, ११ असोज । परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ न्युर्योक च्याप्टर, जनसम्पर्क समिति र न्युयोर्कस्थित महावाणिज्यदूत कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा आइतवार आयोजित भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा भाग लिन पुगेका उनले एमसीसी परियोजना संशोधनका लागि अमेरिका कुनै हालतमा तयार नहुने जानकारी गराएका हुन् ।
‘एमसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको छ । त्यसका बुँदाहरु नेपालमा संशोधन गर्दा अन्य देशमा समेत समस्या आउन सक्छ’, उनले भने, ‘त्यहीकारण यो संशोधन गर्न सकिँदैन । यो पाँच वर्षे परियोजना हो, यदि हामीले विवाद झिकिरह्यौं भने बरु अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ । तर त्यसको दूरगामी असर भने नेपालले भोगिरहनु पर्छ ।’
एमसिसीबारे अहिले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका प्रचारलाई उनले भ्रमपूर्ण र अनर्गल भने। मन्त्री खड्काले नेपालको सडक र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि एमसिसी नेपाललाई आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
अमेरिकाले एमसीसीमा सम्झौताका कुरा नमान्ने पनि उनले बताएका छन् । ‘संशोधनका कुरा अमेरिकाले मान्दैन । यो अन्य देशलाई पनि लागु हुने गरी बनाइएको फरम्याट हो । संशोधन हुनै सक्दैन’, उनले थपे, ‘हामीले संशोधन गर्नेतिर लागेमा अमेरिकाले रद्द गर्छ । हामीले हस्ताक्षर गरिसक्यौं । हस्ताक्षर गर्दा किन नहेरेको त ? यस्ता तमाम कुराहरु छन् ।
उनले यो परियोजना पाँच वर्षको मात्रै भएकाले अब निर्णय लिनुपर्ने पनि बताए । ‘यसको समय ५ वर्षको मात्रै छ । सबैको सहमति हुन्छ भने गरौं तर ठीक छैन भने नगरौं । सबै दलहरूको सहमति भयो भने राम्रो हुन्छ’, उनले भने, ’उत्तरमा रुस र दक्षिणमा चीन छिमेकी भएको मंगोलिया ले त एमसीसीको सहयोग लिएको छ भने हामीले लिँदा कुनै जोखिम हुँदैन ।’